उप सभामुख शिवमायाका सामु नेकपा सचिवालय नै निरीह , अब के हुन्छ ? - Maxon Khabar
Home / News / उप सभामुख शिवमायाका सामु नेकपा सचिवालय नै निरीह , अब के हुन्छ ?
उप सभामुख शिवमायाका सामु नेकपा सचिवालय नै निरीह , अब के हुन्छ ?
२०७६ पुस २७ काठमाडौं - निवर्तमान सभामुख महराले राजिनाम दिएपछी रिक्त रहेकाे सभामुख पद काे टुङ्गाे लगाउन शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो, जसले उप- सभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलेलाई राजीनामा गर्न लगाउने सर्वसम्मत निर्णय पनि गर्‍यो तर नेकपाकै सांसद रहेकी उप- सभामुख शिवमायाले आफू सार्वभौम संसदको उप-सभामुख भएको र पार्टीको ह्वीप नमान्ने बताइन । शिवमायाको अडानले हैरान बनेका नेकपा नेताहरुले आइतबार बिहान उनलाई बालुवाटारमा बोलाए । शिवमाया बिहान ११ बजेतिर बालुवाटार पुगिन । पुस ४ गतेदेखि कैयाै पटक स्थगित हुँदै आएको संसदको बैठक आइतबार दिउँसो बस्ने तालिका तय पनी भयाे ।
नेकपा नेताहरुको अपेक्षा शिवमायालाई राजीनामा गराउने र ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक राखेर सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने थियो तर सभामुखका लागि शीत लनिवासको बलियो साथ पाएकी शिवमायाले आइतबार बालुवाटारमा पुगेर राजीनामा नदिने अडान फेरी पनी लिएका छन । उनले राजीनामा माग्ने निर्णय लेख्ने सचिवालयको सदस्य को हो भनेर सोधिखोजी समेत गरिन् । साथै माघ ६ गतेसम्मका लागि संसदको बैठक पुनः स्थगित भएको छ । उता संसद बैठक बारम्बार स्थगित गरेर नेकपा अकर्मन्यतामा फसेको नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीका नेताहरुले आपत्ती जनाएका छन । प्रतिनिधिसभालाई सत्तापक्षले बन्धक बनाएको विपक्षीको आरोप लगाएका छन । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, ‘दलगत अनिर्णयको बन्दी प्रतिनिधिसभालाई निरन्तर बनाउने यहाँहरुको अकर्मण्यता आपत्तिजनक छ ।
त्यसै गरी भुपु प्रम तथा समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपाले आन्तरिक खिचातानीका कारण संसदलाई बन्धक बनाइएको बताएका छन । तर नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले सभामुख र उपसभामुख प्रकरण सहज ढंगबाट टुंगिने बताएका छन । यसबारे नेकपामा देखिएको विवादले विरोधीहरुको ‘जिब्रो रसाएको’ महासचिव पौडेलको आरोप छ । ‘अहिले हामीलाई थाहा छ, सभामुखको प्रसंग आएपछि नेकपाको अग्रगति देख्न नचाहने प्रवृत्तिहरुका जिब्रो रसाएका छन् । यही प्वालबाट छिरेर नेकपालाई संकटमा धकेल्न सकिन्छ भन्ठानिरहेका छन्’ महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘यो बेकारको मृगतृष्णा हो ।
यस्तो मृगतृष्णा पूरा हुनेवाला छैन । कत्रा-कत्रा चुनौतीको सामना गरेर, कत्रा-कत्रा अन्तरविरोधहरुलाई किनारा लगाएर आएका छौं । उपसभामुख शिवमायाले सभामुख बन्ने सुनिश्चतता नहुँदासम्म राजीनामा नदिने अडान लिदै आएकी छिन् । उता पूर्वमाओवादी खेमाले कुनै पनि हालतमा आफू समूहले सभामुख पाउनुपर्ने बटमलाइन बनाएको बताइएकाे छ । नेकपा, पार्टीको महाधिवेशन नहुञ्जेल भागवण्डामै चलिरहेको हुनाले पनी सभाभुख पद स्वतः पूर्वामाओवादीले पाउनुपर्ने नेकपा नेता हरिबोल गजुरेलले बताए । अहिले शिवमाया तुम्वाहाम्फेले राखिरहेको अडानका पछाडि व्यक्तिमात्रै नरहेर ठूलो षडयन्त्र लुकेको गजुरेलको बुझाइ छ । साथै उनले पार्टीको अनुशासन र निर्णय नमानेका कारण अब शिवमायालाई सभामुख बनाउने सम्भावना समाप्त भएको दाबी गरेका छन ।